Laber ® Profa Girazi Fekitori | China Laber ® Profaidhi Girazi Vagadziri, Suppliers
Yakadzvanywa & Ceramic Frit & Yakashatirwa-Yakadzika-E U Girazi / U Channel Girazi
Basic Info Takudzwa U mbiri girazi rine ruvara girazi iro rinodzora ose anotaridzika uye anopenya transmittances. Girazi rakapetwa rinenge rinoda nguva dzose kurapwa kwekupisa kuti ubvise kunetsekana kwemafuta uye nekupwanya uye rinoita kudzoreredza kupisa kwakadzika. Yedu tinted U profile girazi zvigadzirwa zvinouya mumhando dzakasiyana uye zvinogadziriswa neyekutumira kwechiedza. Zvinokurudzirwa kuti udze chaiwo egirazi samples yechokwadi ruvara inomiririra. Colored ceramic frits inodzingwa pa650 degrees Celsius pane b ...
Basic Info U mbiri girazi kana inonzi U chiteshi girazi rinobva kuAustria. Iyo zvakare inogadzirwa anopfuura makore makumi matatu neshanu kuGermany. Seimwe yezvinhu zvakajairika zvinoshandiswa muzvirongwa zvekuvaka zvakakura, U mbiri girazi inoiswa zvakanyanya muEurope neAmerica. Iko kunyorera kweU profile girazi muChina kwakanyorwa kubva kuma1990. Uye ikozvino nzvimbo zhinji muChina dzinoishandisa kune yayo-yepasi-based dhizaini maitiro. U mbiri girazi imwe yemhando yekukanda magirazi. Iko kufambira mberi kwekuumba mune t ...
Yakadzika Iron U Profa Girazi / U Channel Girazi Simba reGeneral System
Basic Info Yakadzika simbi U mbiri girazi simba girazi rekuvakisa zvigadzirwa (UBIPV) kusanganisa zvakanakira U mbiri yekuvaka girazi uye neyakagadziriswa emagetsi gadziriro sisitimu kusimudzira girini kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye simba-kuponesa uye emission kuderedza. UBIPV neguta zvinogona kusangana zvakabatana kuita kuti Photovoltaic ive chikamu chehupenyu hwevanhu. Haisi chete iyo iri yekuvakira zvinhu, asi inogonesawo kuwana simba-rekuchengetedza magetsi uye zvinangwa zvinopa simba, uye inogonawo kusanganisa pamwe ...
Basic Info U mbiri girazi U chiteshi girazi- Iko kusanganiswa kweanesthetics uye zvinoshandiswa Musarudzo wegirazi nekuda kweiyo chivakwa kana hofisi yekumisikidza haufanire kurerutswa. Iwe unofanirwa kugara uchiongorora zvaunosarudza kuti upedze nemufananidzo-wakakwana. Kana izvi ndizvo zvauri kuita izvozvi, yedu U mbiri girazi yakakodzera kutarisisa pairi. Haisi kungoita seinotaridzika, asi iyi mhando yeU profile girazi / U chiteshi girazi zvakare ine zvakawanda zvinhu zvinoita kuti ive yakakodzera ekunze uye mukati ...